प्रिय पारस ! तिमी कप्तान भएकै सुहाउँछ ! – Life Nepali
प्रिय पारस ! तिमी कप्तान भएकै सुहाउँछ !
प्रिय पारस ! आईसीसीले क्यान निलम्बन फुकुवा गरेको २४ घण्टा नबित्दै तिमीले राष्ट्रिय टिमको कप्तानबाट राजीनामा दिएको खबरले म स्तब्ध भएँ । ममात्र होइन, नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्ने हरेक समर्थक दुःखी भए । नेपाली क्रिकेट र पारस अनि पारस र नेपाली क्रिकेट एकअर्काको पर्यायजस्तै बनेको छ । मलाई यो पनि थाहा छ, हरेक खेलाडीको जीवनमा उतारचढाव आउँछन् । एक दशक नेपाली टोलीको सफल कप्तानी गरेपछि ढिलोचाँडो तिमीले नयाँ पुस्ताका लागि बाटो छाड्नुपर्ने अवस्था त एकदिन आउँथ्यो नै, तर अहिले नै त्यो बेला भइसकेको थिएन ।
राजनीतिक अस्तव्यस्तता, नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा जनमानसमा रहेको बेला नेपाललाई जोड्ने बलियो सूत्र थियो, क्रिकेट । तिमी नायक थियौ त्यही क्रिकेटको । अभाव, पीडा र दुःखको नियतिका बीच बेलाबेला हुने क्रिकेटले मजस्ता युवा उत्साहित हुन्थ्यौं । खै किन हो पारस, तिमी राष्ट्रको जर्सी लगाएर मैदान प्रवेश गर्दा मेरो मनमा बेग्लै अनुभूति हुन्थ्यो । लाग्थ्यो, पारस भए जेपनि सम्भव छ । नेपाली क्रिकेटको अभिभावक संस्था क्यान नै नभएको बेला तिमीले पूरै टिमलाई एक बनायौ । खेलिरह्यौ अभावका बीच, झेलिरह्यौ चुनौतीहरु । तर तिमी डगमगाएनौ ।
आफ्नो बल र ब्याटले जसले पनि प्रदर्शन गर्ला, त्योभन्दा ठूलो थियो तिम्रो नेतृत्व । एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान नभएको देशबाट तिमीले देश चिनाइरह्यौ । तिमी कहिले थाकेनौ मैदानमा रहँदा होस् या बाहिर रहँदा । तर पारस, जब नेपाली क्रिकेटको नयाँ युग सुरु हुने अपेक्षा गरियो, क्यानको निलम्बन फुकुवा भएर क्रिकेट नयाँ उचाइमा जाने बाटो खुल्यो, तिमी किन पछि हट्यौै ? किन यति अप्रिय निर्णय लियौ कप्तान ? हामीले देखेका छौं मैदानमा पारसले देशका लागि बगाएको सपना । हुन त तिमी सहजै तर्क गर्न सकौला, नयाँलाई नेतृत्वको अवसर दिएको हो भनेर । तर यति हतार किन ?
जब नेपाली क्रिकेट तिम्रो नेतृत्वमा तिम्रो हात समाएर बामे सर्न खोज्दै थियो, त्यही बेला तिमी किन पछि हट्यौ ? प्रिय पारस, तिमी कप्तान भएकै सुहाउँछ । ”प्रिय पारस ! नेपाललाई डिभिजन ५ हुँदै एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने यात्राका तिमी नायक हौ । तिम्रै कप्तानीमा देशले टि–ट्वान्टी वर्ल्डकप खेल्यो । नेपालको खेल भएको दिन मनमा बेग्लै खुसी हुन्थ्यो । युट्युबमा नेपालको खेल कहाँ लाइभ आउँछ भनेर खोजिन्थ्यो ।
त्योभन्दा बढी चासो हुन्थ्यो, तिमीमा । पारसले आज के गर्लान् ? तिम्रो ब्याटिङ बिग्रिए, बलिङमा चमत्कार होला नि भन्ने लाग्थ्यो । यो भरोसा तिमीले दिलाएका थियौ । हुन त आफू पछाडि सरेर अरुलाई नेतृत्वको अवसर दिने हिम्मत र फराकिलो छाती कमैको हुन्छ । तर बेला भइसकेको थिएन, अझै तिम्रो हात सामातेर अगाडि बढ्न चाहन्छ नेपाली क्रिकेट । त्यसैले आफ्नो अप्रिय निर्णय फिर्ता लेऊ । मैदानमा कप्तान बनेर फेरि आऊ । ‘उही तिम्रो शुभचिन्तक केशव जोशी ।
राजीनामापछि पारसले भने- कप्तानी मात्र छाडेको हो, ब्याट छाडेको छैन !
नेपाली राष्ट्रिय टोलीको कप्तान पारस खड्काले आफूले टिम कप्तानबाट राजीनामा दिएपनि ब्याट भने नछाडेको बताएका छन्। खेल नै छोडेको नभएको तर केही समयका लागि भने ब्रेक भने लिने उनको भनाइ छ। कप्तानीबाट राजीनामा दिएसँगै उनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।आफूले कुनै असन्तुष्टिका कारण राजीनामा नदिएको स्पष्ट पार्दै पारसले खुसीसाथ कप्तानीबाट राजिनामा दिएको समेत बताएका छन्।
राजीनामा दिएपनि टिममा बसेर अझै क्रिकेट खेल्दै राष्ट्रको हितमा सक्दो योग्दान गर्ने उनको भनाइ थियो। मैले जे निर्णय गरेँ, त्यो ठिक गरेको छु,’ उनले भने, ‘यो निर्णयबाट विचलित हुँदिनँ। अब टिमको कप्तानीमा फर्कन पनि सक्दिनँ।’ आफूले हतारमा अप्रत्यासित रुपमा यो निर्णण नलिएको समेत बताएका छन्। सन् २००९ देखि नेपाली टोलीको कप्तान रहेका खड्काले मंगलबार पद छोडेको घोषणा गरेका हुन्। मैले राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न पाउँला भन्ने सोचेकै थिइनँ। कप्तानी नै गर्ने अवसर पाएँ,’
पत्रकार सम्मेलनमा भने। आफूले धेरै पहिलो देखि क्यानको निलम्बन फुकुवाको पर्खाई रहेको र त्यो पूरा भएसँगै राजीनामा दिएको उनले बताए। आफ्नै कप्तानीका अवधिमा राष्ट्रिय टोलीले एकदिवसीय मान्यता पाउनु सबैभन्दा गर्वको कुरा रहेको उनको भनाइ थियो। पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कम्तीमा एक वर्ष नेपाली टोलीको कप्तानी ज्ञानेन्द्र मल्लले गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन्।
Previous पारस खड्काले त्या’गे राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तानी !
Next धुर्मुस–सुन्तलीले नि’र्माण गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको डी’पीआर त’यार !